Isimo Sokukhangiswa Kwe-Agile ngo-2016 | Martech Zone
ULwesihlanu, July 29, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Cishe iminyaka emi-2 edlule, UJascha Kaykas-Wolff wabelane ngani Ukukhangisa kwe-Agile kwaba futhi kungani izinkampani kwakudingeka zishintshe amasu azo ukusebenzisa le ndlela. Noma ungalandi incwadi kaJascha, qiniseka ukuthi uyayifunda indatshana eqhubeka ngokujulile ukumaketha okudala. Manje sesihambe ibanga elingakanani?
Abasebenza phambili bakhiphe eyabo Ucwaningo lwe-Agile Marketing imiphumela eyenziwe online nge I-MarketingProfs, futhi nanka amaphuzu avelele ambalwa:
I-41% yabathengisi basebenzisa izindlela ze-Agile ukuphatha umsebenzi
Ama-43% wabathengisi abazi ukuthi i-Agile iyini nokuthi isebenza kanjani
Ama-40% wabakhangisi basebenzisa inhlanganisela yezindlela eziningi (impophoma / yendabuko, i-Agile, esebenzayo)
Ama-57% wabakhangisi babika ukuthi izinqubo zabo zokuhlela umsebenzi ziyabheda, okungenani
Kukhona ngisho nenkinga nabathengisi abafaka phakathi ukumaketha okudala amasu… njengoba kungenzeka badideke ukuthi yini ukumaketha okudala ngempela kunjalo. Bangu-14% kuphela abathengisi abathi bahlele kabusha ngamabomu umsebenzi ngokuya ngempendulo.
Kukhona ithuba elikhulu labathengisi abacabanga phambili ukuletha ushintsho oluhle enhlanganweni yabo ngokusebenzisa izindlela ze-Agile. I-Agile igxile ekwenzeni ngcono ijubane, ukukhiqiza, ukuzivumelanisa nezimo, kanye nokuphendula komsebenzi wobuciko. Amandla we-Agile Wokusebenzela ahlinzeka ngenye indlela yezinqubo zokuphathwa kwamaphrojekthi wendabuko ngokunikela ngesakhiwo se-Agile esingamukelwa kalula ngabasebenzisi ngejubane labo, noma sixutshwe nezindlela eziningi zendabuko zempophoma. UJoe Staples, oyiChief Marketing Officer eWorkfront
Nayi i-infographic ngokubuka konke kwemiphumela.
Tags: sishayeukumaketha okudalaizindlela zokuthengisa ezisheshayoamasu wokukhangisa asheshaizindlela ze-agilejoe okuyisisekeloIndawo yokusebenza
I-Tracx: Zuza imininingwane, Khulisa ukuzibandakanya, futhi ulinganise umthelela ngebhizinisi lakho lomphakathi